सोमबार यस्तो अनौठो दृष्य देखियो प्रहरी हेडक्वार्टरमा ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार सोमबार यस्तो अनौठो दृष्य देखियो प्रहरी हेडक्वार्टरमा !
सोमबार यस्तो अनौठो दृष्य देखियो प्रहरी हेडक्वार्टरमा !
on: ३ फाल्गुन २०७३, मंगलवार ०७:३५ In: पु.समाचारTags: No Comments
काठमाडौं । सोमबार दिउसो साढे तीन बजे प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको बिदाईको कार्यक्रम राखिएको थियो । तर,त्यो कार्यक्रम साँझ साढे ६ बजे मात्र सुरु भयो । कसलाई निमित्त दिने भन्ने विवादमा बिदाई कार्यक्रम ढिला सुरु भएको हो ।
अध्यारो हुँदासम्म अर्याल सरकारको निर्णयको पखाईमा थिए । तर, चार साँझसम्म पनि निर्णय नभएपछि उनले मुख्यालय छाडेका थिए । अर्यालसहित सोमबारदेखि अवकाश पाएका एआईजीहरु डा।पोखरेलले नै फुलमाला लगाएर बिदाई गरेका थिए ।
मंगलबारका पत्रपत्रिकाहरुमा लेखिएको छ, सरकारले आइतबार जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । तर, आइतबार नै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरीम आदेश जारी गरेपछि प्रहरीमा कमाण्डको समस्या उत्पन्न भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रहरी नियमावली ०७१ को नियम ४१ विपरीत बढुवा गरिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।
राप्रपा राजसंस्थाको पक्षमा
राजनीतिक दाउपेचको चपेटामा पर्दै प्राधिकरण
३ फाल्गुन २०७३, मंगलवार ०७:३५